आफ्ना यी खराब बानी हटाउनुभयो भने तपाइँ सफलताको बाटोतर्फ बढ्नुहुन्छ -
आफ्ना यी खराब बानी हटाउनुभयो भने तपाइँ सफलताको बाटोतर्फ बढ्नुहुन्छ
यी खराब बानी आफ्ना हटाउनुभयो भने तपाइँ अवश्य सफलताको बाटोतर्फ बढ्नुहुन्छ
१. ‘ट्रेन्ड’ को पछाडी लाग्ने बानी:
२. अरुलाई काम अह्राउने, परनिर्भर रहने बानी:
३. धेरै मोबाइल चलाउने बानी:
४. एकै पटकमा धेरै काम गर्ने बानी:
५. आफूलाई अरुसंग तुलना गर्ने बानी:
६. सधै हुन्छ भन्ने बानी:
सफल व्यक्ति र सामान्य व्यक्तिमा यस्ता ७ फरकहरु हुन्छन:
एउटा सामान्य व्यक्ति नै सफल र विशेष बन्ने हो । तर सबै सामान्य मानिसहरु सफल र विशेष बन्दैनन् । सामान्य रहिरहने र सफल हुने व्यक्तिमा केही फरकपनहरु हुन्छन् ।
सामान्य व्यक्ति आफूसंग जे छैन, त्यो कुराको चिन्ता गरेर बस्छ । उसको समय गुनासो गरेर नै बितिरहेको हुन्छ । सफल व्यक्तिले आफूसंग भएको कुरालाई स्रोतमा बदल्छ । उसले आफूमा आउने विचार, भावना, रिस सबैकुरालाई कामको स्रोत बनाउँछ ।
सामान्य व्यक्तिले आफूबाट भएका गल्तीको लागि पश्चताप गरेर बस्छ या त अरुलाई दोष दिएर हिडिरहेको हुन्छ । सफल हुने व्यक्तले आफूले गरेको गल्तीको जिम्मेवारी लिन्छ र आगामी दिनमा त्यस्तो गल्ती नगर्ने प्रण गरेर अगाडी बढ्छ । त्यो गल्ती उसको लागि सिकाई बन्छ ।
सामान्य व्यक्तिले अरुले के गरिरहेका छन् त्यो हेर्छ । उसले अरु मान्छेले जुन कामबाट जसरि पैसा कमायो या सफल भयो, त्यस्तै गर्न थाल्छ । सफल हुने व्यक्तिले अरुको ध्यान जुन काममा गएको छैन, जुन तरिकाले अरुले काम गरेका छैनन् , त्यो गर्न थाल्छ ।
सामान्य व्यक्तिले सफलतालाई नतिजासंग तुलना गर्छ । सफल हुने व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तित्व विकास, आफ्नो सिकाइलाई सफलता मान्दै आफूलाई प्रेरित गर्छ र अगाडी बढिरहन्छ ।
सामान्य व्यक्तिले एउटा निश्चित बिन्दुलाई आफ्नो गन्तव्य बनाउँछ । त्यो बिन्दुमा पुगेपछि ऊ सन्तुष्ट भएर बस्छ । तर सफल हुने व्यक्ति कुनै एउटा बिन्दुमा पुगेपछि सन्तुष्ट भएर बस्दैन । ऊ एउटा गन्तव्यको नजिक भएपछि फेरी अर्को गन्तव्यमा पुग्ने बाटो पहिल्याउन तिर लाग्छ । उसको लागि सफलता भनेको निरन्तरको यात्रा हो ।
सामन्य व्यक्तिमा पनि सफल हुने व्यक्तिमा जस्तै क्षमता हुन्छ । तर उसले आफ्नो क्षमतामाथि विश्वास गर्दैन, अवसरलाई चिन्दैन र जोखिम देखि डराउँछ । सफल हुने व्यक्तिमा आत्मविश्वास हुन्छ । त्यही आत्मविश्वास र आफ्नो क्षमतालाई मिलाएर ऊ जोखिम उठाउन तयार हुन्छ ।
‘मिर्मिरे युवा समाज’द्वारा अनाथ बालबालिकालाई खाद्यान्न सामग्री सहयोग
यी ७ व्यक्तिलाई कहिल्यै पनि नमस्कार नगर्नुस्
दुबईबाट विश्वलाई आइपिएल देखाउँछन मजदुरी गर्न भारत गएका नेपालका हर्कबहादुर
जीवन दर्शन : अरूको धनमा आँखा नगाड्नु , श्रम नगरी नबस्नु
यसरी बनाउने बच्चालाई राम्रो, प्रेरणादायी र आत्मविश्वासी
भारत पस्ने नेपालीहरुको व्यथा, सिंहदरबारलाई के थाहा !
पूर्व लडाकु भीमबहादुर ठेकी बनाएर गुजारा चलाउँदै